Mmetụta ofchịkọta na Enkwalite B2B Data maka Ahịa | Martech Zone
Mmetụta ofchịkọta na hankwalite B2B Data maka Ahịa
Sọnde, Septemba 13, 2015 Douglas Karr
Mgbe m malitere njem ụlọ ọrụ m na-emejuputa mmelite na-aga n'ihu, otu nchọta nke kwekọrọ na ịkwalite usoro ọ bụla bụ enweghị ike - na ohere na - esote - n'aka. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, achọpụtara m na nke a bụ eziokwu na ụlọ ọrụ anyị.
Otu ihe atụ bụ mgbe ndị ahịa anyị na-atụgharị n'ọnọdụ ha. Mgbe onye na-eme mkpebi gbanwere, ọ na-abụkarị mmekọrịta ya na onye ahịa ya nọ n'ihe ize ndụ. Ọ dịghị mkpa otu anyị si eme nke ọma; ọ bụ nnọọ eziokwu. Onye ohuru a nwere oru ha, usoro ya na - otutu oge - otu ndi na akwado ulo oru ndi nyeere ha aka n’oge gara aga ma gha enyere ha aka n’odinihu.
Mgbe mgbanwe ahụ mere na ndị ndu, mmefu ego na ohere na-esochi. Ihe atụ ọzọ - anyị na - ahụkarị onwe anyị ka anyị na - arụ ọrụ maka mmalite teknụzụ ndị na - eto eto nwere nnabata nke ntinye ego. Mgbanwe juru ebe niile! Na nke a ozi sitere na Salesforce, Ha na-arịba ama na ọkara ọkara elekere azụmahịa 120 gbanwere, ọnụọgụ ekwentị 75 gbanwere, ndị isi iri abụọ hapụrụ ọrụ ha ma azụmaahịa 20 ọhụrụ. Inwe ohere inweta data dịka nke a dị mkpa iji zụlite azụmahịa m yana nke gị.
Ahịa Data.com nwere ike inyere gị aka ime ka data gị kawanye mma ka ị nwee ike ịmepụta profaịlụ zuru oke nke na-enyere gị aka ịhazi onwe gị, nyere gị aka ikpughe echiche site na nkewa ka mma na ịhazi ụzọ ma melite ịzụ ahịa na ire ahịa na izi ozi na nkwekọrịta.
Ndị na-ere ahịa nke oge a kwesịrị ijikọta ihe okike na ike ịkọ akụkọ na nyocha na atụmatụ data. Data ka mma na-enyere ndị ahịa aka iwulite mkpọsa ezubere iche ma nyefee ọdịnaya ziri ezi na atụmanya. Site na ịnakọta na nyochaa ụzọ ndu, ndị na-ere ahịa nwere ike ịnyefe nghọta ndị ahịa ha zuru oke na otu ndị ahịa ha, na-ahụ na onye ọ bụla nọ n'otu ibe na ịmepụta ahụmịhe ndị ahịa ahaziri iche. Kim Honjo, Ahịa
Data na-enye ohere di egwu maka azụmaahịa dịka nke m. - Salesforce nwere akwụkwọ ntanetị ọhụrụ, Etu otu ndi otu data na-achuputa ihe iga nke oma, maka azụmahịa iji mụta otú ahịa, ahịa, na ndị ọrụ nchịkwa CRM nwere ike isi wuo nzukọ na-aga nke ọma na-aga nke ọma, na-eme ka ọganihu azụmaahịa gaa nke ọma.
Tags: b2bdata kọntaktị b2bb2b datakọntaktị datadatazuru ezu dataogo datadata erereNkwado ire ahịandị ahịa